प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम आलेले सर्वसाधारणलाई अपशब्द प्रयोग गरी अपमान गरेका छन् ।
कैलाली जिल्लास्थित विभिन्न सामुदायिक वनमा लागू भएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको स्थलगत अनुुगमन गर्न पुगेका सांसद आलेले ‘टाउको तल गर म को हुँ चिन्छस् ?’ भन्दै अपमान गरेको पाइएको छ ।
वैज्ञानिक वनको नाममा व्यापक फडानी भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय छानबिन उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिका सदस्य रहेका सांसद आलेले अनुुगमनका क्रममा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र तल्लो स्तरका वन कर्मचारीलाई अपशब्द प्रयोग गरेको तथा धम्क्याउँदै हिँडेको बताइएको छ ।
डोटीबाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद आलेले छानबिन समितिका संयोजक प्रदीप यादव सहितको टोली सोमवार कैलाली पुगेका छन् । समितिले कैलालीको महोन्याल गाउँपालिका–३ फलेबिसौना पुगेको थियो ।
सांसद आलेले जनकल्याण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जनक गिरीलाई झपार्नु झपारे । आफ्नो कार्यशैलीले सांसद आलेले आफ्नै सांसद पदको गरिमाका धज्जी उडाएको बताइएको छ ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष गिरीले आफूलाई सांसद आलेले झपारेको कुरो सुनाउँदै भने, ‘म को हुँ, चिन्छस् । के मुखमा के हेरेको टाउको तल गर । तँ साले बढ्ता कुरा गर्छस् । हामी माननीय हुँ मेरो मुखमा हेरेर कुरा गर्ने तँ को होस् ? तेरो वनमा कुन ठेकेदारको लगानी छ भन ?’
सरकारले नै लागू गरेको वैज्ञानिक वन कार्ययोजना अनुसार काम गरिरहेको बताउँदै उनले सबैको सामु सांसद जस्तो व्यक्तिले अमानवीय ढंगले झपारेको बताए ।
दलबलसहित अनुगमन गर्न पुगेका उनले गाली गलौचसहित धम्कीको शैलीमा उत्रिएपछि वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारी त्रसित भएका छन् ।
नाम नभन्ने शर्तमा वनका एक कर्मचारीले भने, ‘मेरो मान्छेको फाइल फालेर अरुलाई ठेक्का दिने ? तिमीहरू सबैलाई देखाइदिन्छु । दुईतिहाइको सरकार छ, म को हुँ चिन्छस् ?’
उपसमितिले तथ्य कुराको छानबिन गर्ने हो तर उनी सर्वसाधारणलाई धम्क्याउँदै, गालीगलौच गर्दै हिँड्नु सांसदको गरिमा विपरीत रहेको वनका कर्मचारी बताउँछन् । हाल वैज्ञानिक वनको अनुगमनमा आएका सांसद आलेलाई उल्टै वन माफियाको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कोरोनाले थप १ जनाको मृत्यु
थप २५९ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या २१ ह...
बालुवाटार, अख्तियार र परराष्ट्रका कर्मचारीको कोरोना...
होमस्टेले ल्यायो लामा बस्तीमा परिवर्तन, गोठबाट घर जाने दिन समाप्त
काठमाडौँ महानगरका सबै सामूदायिक विद्यालयका छात्रालाई अब निःशुल्क स्यानिटरी प्याड
लकडाउनबारे विज्ञकै मत बाझियो, डाक्टरहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के दिए सुझाव ?
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको परामर्श बैठकमा किन गएनन् प्रचण्ड ?
बालुवाटारमा तेस्रो दिन पनि ओली-प्रचण्डबीच छलफल
अडी कारले असंवेदनशील विज्ञापन बनाएकोमा माग्यो क्षमा